Akụkọ Paul Childs na Martech Zone |
Edemede site na Paul Childs
Mmelite nzuzo nke Apple agbanweela ka ndị na-ere ahịa e-commerce si arụ ọrụ ha. N'ime ọnwa ole na ole ka ewepụtara mmelite ahụ, ọ bụ naanị obere pasentị nke ndị ọrụ iOS abanyela na nsochi mgbasa ozi. Dabere na mmelite June kachasị ọhụrụ, ihe dị ka 26% nke ndị na-eji ngwa zuru ụwa ọnụ kwere ka ngwa soro ha na ngwaọrụ Apple. Ọnụọgụ a dị obere na US na naanị 16%. BusinessOfApps Enweghị nkwenye doro anya iji soro ọrụ onye ọrụ gafee oghere dijitalụ, ọtụtụ